Impilo ayisafani nakuqala ku Madoda – Ntu News
June 21, 2021 June 21, 2021 Jaco Gangat-Duvenage	0 Comments
UMadoda Beya oneminyaka engamashumi amathathu anesihlanu (35) uvakalisa intlungu aphila phantsi kwayo emva kokufumana ukhubazeko lomzimba.
Le ndoda eyinzalelwane yase Zwelitsha e-zone 5 ngase Qonce, yafumana ukhubazeko ngonyaka u-2011 emva kokutsha netyityombe eyayikulo. Ngenxa yomonzakalo eyawufumana kulo mlilo kwaye kwanyanzeleka asebenzise isitulo esinamavili (Wheelchair) uku hamba-hamba.
Nangona kunjalo uBeya uthi usaphila ngambona ndenzile.
“Isitulo endandisifumene esibhedlele iCecilia Makiwane ukonzakala kwam saphela ngonoquku, endinaso ngoku ndasifumana ngo 2019 njengesipho komnye wabazili ongukhazini kaMama wam ongasekhoyo, ngethuba wayeze kumngcwabo kaMama” utshilo uBeya.
Njengoko ingumthetho eMzantsi Afrika ukuba nabani na ophila nemeko yokhubazeko afumane inkxaso mali kurhulumente eyaziwa ngokuba yhi (Disability grant) uku khawulelana neemeko zokuphila, oku akuzisanga tshintsho lungako ebomini buka Beya.
“Ndaqala ukufumana imali yesibonelelo ngonyaka u2012 kwaye ndiyamkelelwa nguKhazini wam kwaye zange sivumelane malunga nalonto. Ngaphambili ebendinika R200 andithengele nokutya ngokusuku lokwamkela, sithetha nje kuba inyuke imali yam undinika iR400 andithengele ukutya” unabe watsho uBeya.
uSibusisiwe Beya ongumzukulwana kweli khaya nokwangumtshana apha kuMadoda uthi impilo abayiphilayo ayiginyisi mathe.
“Sibathandathu singamalungu olusapho lakwaBeya asisebenzi ukanti minyaka le siphila ngokufumana izingxungxo ngamaxesha athile kwaye sisenawo amandla okusebenza. Ukanti uMalume uyasifumana isibonelelo sokutya rhoqo ngenyanga yoMnga kwaye oku kutya akuthengelwayo rhoqo ngosuku lokwamkela akusaneli njengoko kungagqibi nenyanga” utshilo uSibusisiwe.
USibusisiwe ushwankathele ngelithi bacela uncedo umalume wakhe afumane isitulo esinavili (Wheelchair) esisebenizisa ibhetri, ukuze ebenokwazi ukuzihambela xa elungisa impilo yakhe nezinye izinto ezibalulekileyo zakhe.
Ukanti bakwacela nabanina unoku nceda ngokubazamela umsebenzi nokuba unjani na bangatsalela kule nombolo ‪079 450 2449‬.
← Kumkanifm supports the Youth of Ward 16
Arhuqa iinyawo amapolisa eZwelitsha →